Banyere ihe nkiri chere ihu plywood
Akụrụngwa eji eme ihe nkiri dị elu na-eche ihu plywood bụ birch nwere njupụta nke 700KG / M3. Ebe ọ bụ na ihe birch siri ike, ihe nkiri a na-eche ihu na plywood e mere nke birch dị nnọọ larịị ma nwee ikike ibu ibu. Agaghị enwe nrụgide ọ bụla n'okpuru nrụgide dị elu. Na mgbakwunye, sọfụ ...
Gịnị bụ plywood
Plywood bụ ụdị osisi e ji osisi rụọ nke a na-agbakọta site na ịkpụpụ. A na-eme plywood site na ịkpụ n'ime nnukwu mpaghara veneers na ntụziaka nke mgbanaka kwa afọ. Mgbe ihicha na njikọta, a na-emepụta ya dịka ọkọlọtọ nghazi ọka mahogany kwụ ọtọ nke veneers dị nso. The nọmba ...
Plywood mmiri - mmiri na-enweghị mmiri
ROCPLEX plywood bu otu n’ime ihe eji osisi eji eme ihe maka imeputa ihe eji egbochi mmiri na mmiri nke nwere uchu. Ọ nwere ike melite itinye n'ọrụ ọnụego nke osisi ma ọ bụ isi ụzọ iji chekwaa osisi. ROCPLEX mmiri plywood nwere ike etinyere yachts, Shipbuilding ụlọ ọrụ m ...